နိုဝငျဘာ, 1906 ။
လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ခြင်းနှင့်မှော်အတတ်ဆိုင်ရာကိစ္စများကိုပြောဆိုရာတွင်မိတ်ဆွေတစ် ဦး ကဤသို့မေးသည် - တဦးတည်းအနာဂတ်မှာသို့ကြည့်ရှုရန်အဘို့အတကယ့်ဖြစ်နိုင်ပါသလော
ဟုတ်တယ်။ ဖြစ်နိုင်တယ် အချိန်ကိုအတိတ်၊ လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်တို့ဖြင့်ခွဲထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အတိတ်ကာလကိုကြည့်ပြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာကိုကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင်မြင်ခြင်းအားဖြင့်အရာတစ်ခုကိုသတိရမိသောအခါ။ အတိတ်ကာလ၌ဤမြင်ကွင်းသည်လူတိုင်းလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်အနာဂတ်ကိုလူတိုင်းမမြင်နိုင်ပါ၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အချို့သည်အနာဂတ်ကိုကြည့်ရှုရန်အတိတ်၏ဗဟုသုတကိုပညာရှိစွာအသုံးပြုကြသည်။ အကယ်၍ လူတစ် ဦး သည်အတိတ်အဖြစ်အပျက်တစ်ခု၏အကြောင်းရင်းများနှင့်ဖြစ်ရပ်များအားလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကသူ၏အသိပညာသည်အနာဂတ်ဖြစ်ရပ်များကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ အနာဂတ်သည်အမှန်တကယ်မလာသေးသောအချိန်ခွဲခြားမှုဖြစ်သော်လည်းအတိတ်၏လုပ်ရပ်များကဖန်တီးပေးသည်။ ဖက်ရှင်၊ အနာဂတ်ဆုံးဖြတ်ပါ၊ အနာဂတ်ကိုကန့်သတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ လူတစ်ယောက်သည်မှန်ကဲ့သို့အတိတ်၏အသိပညာကိုထင်ဟပ်နိုင်ပါကသူသည်အနာဂတ်ဖြစ်ရပ်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းလိမ့်မည်။
ဖြစ်နိုင်ပြီးများစွာသောသူတို့သည်ထိုသို့ပြုကြသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့လူဟာ Clairvoyance၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတာ (သို့) ဒုတိယမြင်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ လတ်တလောမြင်သာမှုရှိရန်ဒုတိယစွမ်းရည်သို့မဟုတ်မြင်နိုင်သည့်အတွင်းစိတ်ကိုအသုံးပြုသည်။ မျက်လုံးကိုမျက်စိမှမြင်နိုင်သည်။ သို့သော်မျက်စိကိုမြင်နိုင်သောအာရုံမှတစ်ဆင့်အလုပ်လုပ်သောထိုဒြေသည်မျက်လုံးမှအခြားကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ (သို့) အခြားအစိတ်အပိုင်းသို့လွှဲပြောင်းစေနိုင်သည်။ ထို့နောက်အရာဝတ္ထုများကိုလက်ချောင်းထိပ်များ (သို့) နေရောင်ခြည်သုံးကိရိယာမှမြင်နိုင်သည်။ ထင်ရှားသောဝေးလံသောအရာဝတ္ထုများကိုကျွန်ုပ်တို့ခေါ်သောအရာများသို့မဟုတ်ဖြစ်ပျက်လာမည့်အဖြစ်အပျက်များကိုကြည့်သည့်အခါမျက်စိဖြင့်မြင်ရသောအရာသည်၎င်းပြုလုပ်ပြီးသောကိုယ်ခန္ဓာ၏အစိတ်အပိုင်းသည်များသောအားဖြင့်မျက်ခုံးအထက်ရှိ ဦး ခေါင်းခွံတွင်ဖြစ်သည်။ မြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်းပေါ်တွင်မြင်တွေ့ရသည့်မြင်ကွင်းသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုသည်မကြာခဏထင်ရှားစွာမြင်တွေ့ရသည့်မြင်ကွင်းမြင်ကွင်းသည်ထိုနေရာ၌ရှိနေသည်။ ထို့နောက်မြင်သောအရာကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ရန်လိုအပ်သောအရာသည်စကားပြောသောစွမ်းရည်ဖြစ်သည်။
ဘယ်လိုထိုကဲ့သို့သောမြင်တတ်သောအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကဆန့်ကျင်အခါတဦးတည်း clairvoyantly ကြည့်ဖို့အတှကျအဖြစ်နိုင်ပါသလဲ
ထိုသို့သောတွေ့မြင်မှုအားလုံး၏အတွေ့အကြုံအတွင်း၌မရှိပါ။ ဒါဟာအချို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံမရှိသောသူများသည်ယင်းတွင်ရှိသောသူများ၏သက်သေခံချက်ကိုသံသယဝင်ကြသည်။ ၎င်းသည်သဘာဝနိယာမတရားများကိုဆန့်ကျင်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်အတော်အတန်သဘာဝကျပြီး၎င်းသည် astra ခန္ဓာကိုယ်၏ Linga sharira သည်၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆဲလ်များနှင့်မချိတ်ဆက်နိုင်သူများဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မြင်သောအရာဝတ္ထုများနှင့်ထိုအရာဝတ္ထုများကိုမည်သည့်အရာများမြင်တွေ့နေရသည်ကိုစဉ်းစားကြပါစို့။ ဗျာဒိတ်ရူပါရုံသည်နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ၏။ ဗျာဒိတ်ရူပါရုံနှင့်စပ်ဆိုင်သောအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့သည်နက်နဲသောအရာတခုအဖြစ်မယူမှတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်လုံးများရှိပြီးလေထဲကိုကြည့်ပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများကိုတွေ့နိုင်သည်။ ငါတို့ထင်တာကဒါကသဘာဝကျတယ်၊ မျက်မြင်ရနိုင်သည့်နိုင်ငံအမျိုးမျိုးကိုသုံးသပ်ကြည့်ကြစို့။ ကျွန်တော်တို့ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာတီကောင်တွေ၊ အင်းဆက်တွေအဖြစ်ရောက်နေတယ်ဆိုပါစို့။ ငါတို့မှာအဲဒီမှာအမြင်အာရုံရှိသင့်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့စွမ်းရည်ကအရမ်းအကန့်အသတ်ရှိလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့မျက်စိအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့သိသောကိုယ်အင်္ဂါများကိုကြီးမားသောအကွာအဝေးများကိုမမြင်နိုင်ပါ။ အဆင့်တစ်ဆင့်ကိုမြှင့် တင်၍ ကျွန်ုပ်သည်ငါးများဖြစ်ကြောင်းဆိုပါစို့။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေ၌မြင်တွေ့ရမည့်အကွာအဝေးသည်အလွန်ကြီးမားပြီးရေမှတစ်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအလင်းတုန်ခါမှုကိုမှတ်ပုံတင်ရန်မျက်လုံးများတပ်ဆင်ထားလိမ့်မည်။ သို့သော်ငါးများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေမှတဆင့်သို့မဟုတ်အခြားတစ်ဖက်တွင်လေကဲ့သို့သောဒြပ်စင်တစ်ခုရှိကြောင်းကိုအခြားမည်သည့်နည်းဖြင့်မျှကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းကိုငြင်းပယ်သင့်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကနှာခေါင်းကိုထုတ်ပစ်ပြီးရေကိုအထက်သို့မျက်စိထဲသို့လေထဲသို့သွင်းလိုက်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသက်ရှူ။ မရသင့်ပါ၊ တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူသားများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ငါးများကို ကြိုတင်၍ အဆင့်တစ်ဆင့်ရှိကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လေထုထဲတွင်မြင်တွေ့ရပြီးအရာဝတ္ထုများကိုမျက်လုံးများမှတစ်ဆင့်ရေမှတဆင့်ထက် ပို၍ ဝေးသောနေရာများတွင်သိမြင်နိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏လေထုသည်ထူ။ မှေးမှိန်နေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်ကိုကန့်သတ်ထားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ချီကာဂို၊ ကလိဗ်လန်နှင့်ပစ်စ်ဘာ့ဂ်အရာဝတ္ထုများကိုမိုင်အနည်းငယ်အကွာအဝေးတွင်သာတွေ့မြင်နိုင်သည်ကိုလူတိုင်းသိသည်။ အားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသည့်မြို့များတွင်မိုင်ပေါင်း ၃၀ မှ ၄၀ တွေ့နိုင်သည်၊ သို့သော်အရီဇိုးနားနှင့်ကော်လိုရာဒိုတောင်တန်းများမှမိုင်ပေါင်းရာနှင့်ချီသောအကွာအဝေးများကိုဖုံးကွယ်ထားနိုင်သည်။ ပိုမိုရှင်းလင်းသောလေထုထဲသို့တက်ခြင်းအားဖြင့် ပို၍ ရှင်းလင်းစွာမြင်တွေ့ရသကဲ့သို့လေထုထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအခြားဒြပ်စင်တစ်ခုသို့တက်ခြင်းအားဖြင့်ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်သည်။ Clairvoyant တွင်တွေ့ရသောဒြပ်စင်သည်အီသာဖြစ်သည်။ အီတာကိုကြည့်ရှုသူ Clairvoyant သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကွာအဝေးအယူအဆသည်တီကောင်သို့မဟုတ်ငါးတို့၏အကွာအဝေးသည်မြင့်သောအမြင့်ရှိနေထိုင်သူတစ် ဦး အားအဓိပ္ပာယ်ကိုဆုံးရှုံးသွားစေသည့်တိုင်၎င်းသည်မျက်လုံးများကအသက်ရှင်နေသူများအတွက်မမြင်နိုင်သောအရာများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည့်တိုင်အောင်တန်ဖိုးဖြတ်သည်။ လွင်ပြင်ပေါ်အနိမ့်အလွှာ၌တည်၏။
အဘယ်အရာကို clairvoyance အတွက်အသုံးပြုတဲ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဘယ်လောက်ကြီးမြတ်အကွာအဝေးမှာသူတို့အား၎င်း, လူသိများမြင်နိုင်ထံမှမသိသောမမြင်ရတဲ့ရန်လက်မှာအနီးရှိအရာဝတ္ထုထံမှလွှဲပြောင်းတဦးတည်း၏ရူပါရုံပါသလဲ
ခန္ဓာကိုယ်ရှိမည်သည့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါကိုမဆို Clairvoyant ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော် Clairvoyant မှအလိုအလျောက်သို့မဟုတ်အသိဥာဏ်ဖြင့်အသုံးပြုသောခန္ဓာကိုယ်၏အစိတ်အပိုင်းများသို့မဟုတ်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများသည် ဦး နှောက်၏ cortex၊ frontal sinus များ၊ pituitary ခန္ဓာကိုယ်။ အနီးရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများကိုမျက်စိရှိလေထုအလင်းလှိုင်းများကရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ထိုအလင်းလှိုင်းများသို့မဟုတ်တုန်ခါမှုများကို optic အာရုံကြောသို့ပြောင်းလိုက်သည်။ ဤရွေ့ကားတုန်ခါ optic tract တလျှောက်ဘွားနေကြသည်။ အချို့ကို ဦး နှောက် cortex သို့ချပစ်သည်။ ဤရွေ့ကားစိတ်ကို၏ရုပ်ပုံပြခန်းဖြစ်သောတိုကျရိုကျအကှေ့မှာထင်ဟပ်။ အဆိုပါ pituitary ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဤရုပ်ပုံများကိုရိပ်မိရသောမှတဆင့်ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာအဲဒီမှာတွေ့ရတဲ့အခါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်တော့ပေမယ့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏နက္ခတ်ဗေဒင်ရုပ်ပုံများ။ ၎င်းတို့သည်အတ္တ၏နက္ခတ်ဗေဒင်လောကသို့ရောင်ပြန်ဟပ်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများဖြစ်ပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုများ၏တုန်ခါမှုသည်ပိုမိုတုန်ခါမှုနှုန်းသို့မြင့်တက်လာသည်ကိုသိရှိရန်ဖြစ်သည်။ လူတစ် ဦး ၏ရူပါရုံသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှနက္ခတ်ဗေဒင်သို့နည်းများစွာဖြင့်ပြောင်းရွှေ့သွားနိုင်သည်။ အများဆုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသည်မျက်စိကိုအာရုံစိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါအီသို့မဟုတ်နက္ခတ္တဗေဒကမ္ဘာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာကြီးကိုကျော်လွန်ပြီး, ထိုးဖောက်ခြင်းနှင့်ဖြတ်သန်းရတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်လုံးသည်အလွန်တည်ဆောက်ထားသဖြင့်ရုပ်နှင့်ကမ္ဘာမှတုန်ခါမှုကိုသာမှတ်ပုံတင်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်စိသည်လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းမခံရလျှင်သို့မဟုတ်၎င်းသည်သဘာဝ clairvoyant မဟုတ်လျှင်အီသာတုန်ခါမှုကိုလက်ခံရရှိခြင်း (သို့) မှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူလူတစ် ဦး သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာမှအီသာရမ်သို့မဟုတ်နက္ခတ်ဗေဒင်လောကသို့မျက်စိ၏အာရုံကိုပြောင်းလဲရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအရာကိုပြုလုပ်ပြီးပါကဖော်ပြခဲ့သောကိုယ်ခန္ဓာ၏အစိတ်အပိုင်းများသို့မဟုတ်အစိတ်အပိုင်းများသည်ကမ္ဘာကမ္ဘာနှင့်ဆက်သွယ်ပြီး၎င်းမှတုန်ခါမှုကိုရရှိသည်။ လူတစ် ဦး သည်မိမိအလိုဆန္ဒ၏အရာဝတ္ထုကိုထိုအရာဝတ္ထုသို့လှည့်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မြင်တွေ့သည်နှင့်အမျှသံသယရှိသောသူသည်အဝေးမှအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုကြည့်ရှုရန်အလိုရှိခြင်းသို့မဟုတ်ညွှန်ကြားခြင်းဖြင့်မြင်သည်။ ယင်းသည်အချို့သူများအတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းပုံရသော်လည်းအဖြစ်မှန်များကိုသိသောအခါအံ့သြသွားသည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သောသဘာဝဖြစ်စဉ်အားဖြင့်ရှင်းလင်းစွာမြင်တွေ့ရသူသည်မြင့်မားသောအကွာအဝေးရှိသောပိုမိုမြင့်မားသောကမ္ဘာသို့မြင့်တက်သွားခြင်းသို့မဟုတ်နက်ရှိုင်းသောပင်လယ်ရေငုပ်ခြင်းကိုရေ၌သူ၏အကန့်အသတ်ရှိသောအမြင်မှမြူဆိုင်းသောလေထုထဲတွင်အမြင်အာရုံသို့မြှင့်တက်စေနိုင်သည်၊ အရာမှသူနေဆဲသာ။ ကြီးမြတ်အကွာအဝေးမှာအရာဝတ္ထုကိုမြင်တော်မူ၏။ ရှည်လျားသောလေ့လာမှုနှင့်လေ့ကျင့်မှုဖြင့်လတ်တလောမြင်တွေ့မှုကိုလေ့လာရန်သင်ယူခဲ့သူတစ် ဦး သည်ဤနည်းလမ်းကိုမလိုက်နာသင့်ပါ။ သူကနေရာတစ်ခုကိုသာစဉ်းစားပြီးဆန္ဒရှိလျှင်ကြည့်ဖို့လိုသည်။ သူ၏အတွေး၏သဘောသဘာဝသည်သူမြင်ရမည့်အရာဝတ္ထုကိုတစ်ချက်ကြည့်ရှုနေသကဲ့သို့သူ့အတွေးနှင့်သက်ဆိုင်သောအီ၏အလွှာများနှင့်သူ့ကိုဆက်သွယ်ပေးသည်။ မြင်နေသည့်အရာဝတ္ထု၏နားလည်မှုသည်သူ၏အသိဥာဏ်ပေါ်မူတည်သည်။ တ ဦး တည်းကသူ၏ရူပါရုံကိုလူသိများမြင်နိုင်သောမှမသိသောမမြင်ရသောသို့လွှဲပြောင်း။ သူနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနိယာမအားဖြင့်သူမြင်သည်ကိုနားလည်လိမ့်မည်။
သူကဒါအလိုတော်နှင့်သူသည်ထိုသို့ပြုမှတစ်ဦး clairvoyant ဒြေကိုအသုံးပြုဖို့ပါဘူးအခါတိုင်းတစ်ဦး occultist အနာဂတ်မှာသို့ကြည့်ရှုနိုင်ပါသလား?
တစ် ဦး က clairvoyant တစ် ဦး မှော်အတတ်မဟုတ်ပါ, တစ် ဦး မှော်အတတ် clairvoyant ဖြစ်နိုင်သည်ပေမယ့်သူကသေချာပေါက်မဟုတ်ပါဘူး။ မှော်အတတ်သမားဆိုသည်မှာသဘာဝနိယာမတရားများကိုသိကျွမ်းသူ၊ ထိုဥပဒေများနှင့်အညီနေထိုင်သောသူဖြစ်ပြီးအတွင်းမှသူ၏အမြင့်ဆုံးဉာဏ်ရည်ဖြင့်လမ်းညွှန်ပေးသူဖြစ်သည်။ အလုပ်သမားသည်အင်ဂျင်နီယာသို့မဟုတ်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်ထံမှနားလည်သဘောပေါက်မှုနှင့်စွမ်းရည်ကွဲပြားမှုရှိသည့်တိုင်မှော်ပညာရှင်များသည်ဗဟုသုတနှင့်စွမ်းအားကွဲပြားသည်။ တစ်ခုမှာ clairvoyance မရှိဘဲ occultist ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ဤဒြေကိုတီထွင်ခဲ့သောမှော်အတတ်သည်သူသည်နက္ခတ်ဗေဒင်ပိုင်ဘာသာရပ်များနှင့်ဆက်ဆံသည့်အခါမှသာ၎င်းကိုအသုံးပြုသည်။ သူသည်၎င်းကိုအပျော်အပါးအတွက်သို့မဟုတ်သူသို့မဟုတ်သူတစ်ပါး၏စိတ်စေတနာကိုဖြည့်ဆည်းရန်မသုံးပါ။ သူသည်အလိုရှိပါကနောင်အနာဂတ်ကာလ၌မိမိ၏အတွေးကိုစေ့စေ့ဆုပ်ကိုင်ထားပြီးမည်သည့်အရာ၌ဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုသိလို။ သိလိုခြင်းအားဖြင့်မှော်အတတ်သမားသည်အနာဂတ်ကိုကြည့်ရှုရန် Clairvoyant ဆရာကိုအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ အဲဒီအချိန်။
တစ်ဦး occultist တစ်ဦးချင်းသို့မဟုတ်စုပေါင်း occultists, လာမယ့်ဖြစ်ရပ်များကိုသူတို့ရဲ့အသိပညာမှအကျိုးမရကြဘူးဘာကြောင့်ကုလားကာထိုးဖောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်?
အနာဂတ်ကိုကြည့်ပြီးသူ၏ဗဟုသုတမှအကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်သည့်မှော်အတတ်သမားသည်စစ်မှန်သောသဘောအရမှော်အတတ်သမားဖြစ်တော့မည်မဟုတ်။ မှော်အတတ်သမားသည်သဘာဝဥပဒေနှင့်အညီအလုပ်လုပ်ရမည်၊ သဘာဝတစ်ခုသည်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏အကျိုးကျေးဇူးကိုတစ်ခုလုံးပျက်စီးစေနိုင်သည်။ အကယ်၍ မှော်အတတ်သမားသို့မဟုတ်သာမန်လူများထက်ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းအားများဖြင့်အလုပ်လုပ်သူမည်သူမဆိုသည်ထိုအင်အားကိုအခြားသူများအားဆန့်ကျင်။ အသုံးပြုသည်သို့မဟုတ်သူ၏တစ် ဦး ချင်းအကျိုးအတွက်သူသည်သူနှင့်အတူလုပ်ကိုင်သင့်သည့်ဥပဒေကိုဆန့်ကျင်။ မဟုတ်ဘဲဆန့်ကျင်သောကြောင့်၎င်းသည်ပြန်လည်ဖောက်ပြန်သူဖြစ်လာသည်။ သဘောသဘာဝနှင့်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သည့်ဖြစ်တည်မှုသို့မဟုတ်သူတီထွင်ခဲ့သောစွမ်းအားများဆုံးရှုံးခြင်း၊ တစ်ခုခုကိုအမှု၌သူတစ် ဦး စစ်မှန်တဲ့မှော်အတတ်ဖြစ်တာတွေရပ်စဲ။ မှော်အတတ်သမားသည်တစ် ဦး ချင်းအနေနှင့်သူ၏အလုပ်အတွက်လိုအပ်သည့်အရာကိုသာခံယူပိုင်ခွင့်ရှိပြီးတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းသို့မဟုတ်အမြတ်ရခြင်း၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သူအားဥပဒေကိုမျက်ကွယ်ပြုလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သူသည်မျက်မမြင်ဖြစ်ခြင်း၊ ထို့နောက်သူသည်အသက်ကိုအုပ်ချုပ်။ ထိန်းချုပ်သော၊ သေခြင်းထက်ကျော်လွန်သော၊ အရာအားလုံးကိုအတူတကွပေါင်းစပ်။ အားလုံး၏ကောင်းကျိုးအတွက်သဟဇာတဖြစ်သောစည်းလုံးမှုဆိုင်ရာဥပဒေများကိုနားလည်။ နားမလည်နိုင်ခဲ့ပါ။
တတိယမျက်လုံးကဘာလဲ။ clairvoyant နဲ့ occultist တို့ဘာကိုသုံးတာလဲ။
စာအုပ်အချို့တွင်ရည်ညွှန်းထားသော“ တတိယမျက်စိ” အထူးသဖြင့်“ လျှို့ဝှက်ချက်အယူဝါဒ” သည်ဇီဝကမ္မဗေဒပညာရှင်များအနေဖြင့် pineal gland ဟုခေါ်သည့် ဦး ခေါင်း၏အလယ်ဗဟိုတွင်ရှိသည့်သေးငယ်သောကိုယ်အင်္ဂါဖြစ်သည်။ ကောင်းသောနှင့်စင်ကြယ်သောဘဝများနေထိုင်ခဲ့ကြသူအချို့ clairvoyants တတိယမျက်စိပွင့်လင်းခဲ့ကြပေမယ့် clairvoyant ဒီတတိယမျက်စိသို့မဟုတ် pineal ဂလင်းကိုဝေးလံသောအရာဝတ္ထုကြည့်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အနာဂတ်သို့ကြည့်ရှုရန်မသုံးပါဘူး။ ဒီဖြစ်ပျက်လာသောအခါသူတို့၏အတွေ့အကြုံများမဆိုအရင်ကနှင့်အတော်လေးကွဲပြားခြားနားပါသည်။ အဆိုပါမှော်အတတ်သမားရိုးကျ pineal gland ကိုမသုံးပါဘူး။ အနာဂတ်ကိုကြည့်ရှုရန် pineal gland သို့မဟုတ်တတိယမျက်လုံးကိုအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အနာဂတ်သည်အချိန်အပိုင်းအခြားသုံးခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ pineal gland မှလွဲ၍ အခြားအင်္ဂါများကိုအတိတ်ကာလသို့ကြည့်ရှုခြင်း၊ လက်ရှိကိုမြင်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ အနာဂတ်သို့စေ့စေ့ကြည့်ရှု။ ထင်းရှူးဂလင်း (သို့) တတိယမျက်လုံးသည် ၄ ​​င်းတို့အားလုံးကိုနားလည်သော်လည်းအချိန်ကာလ၏ကွဲပြားခြင်းအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ၎င်းသည်ထာဝရနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
အဘယ်သူသည် pineal ဂလင်းကိုအသုံးပြုသည်, နှင့်၎င်း၏အသုံးပြုမှုအရာဝတ္ထုကဘာလဲ?
မြင့်မားသောဖွံ့ဖြိုးပြီးသူ၊ မြင့်မားသောမှော်အတတ်သို့မဟုတ်မာစတာသာလျှင်“ တတိယမျက်လုံး” သို့မဟုတ် pineal gland ကိုအလိုအလျောက်သုံးနိုင်သည်။ သူတော်စင်များ၊ သို့မဟုတ်ကိုယ်ကျိုးမငဲ့သောဘ ၀ များကိုရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့ကြသောသူတို့၏မျှော်လင့်ချက်များမြင့်မားခဲ့သူများ သူတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးချီးမြှောက်၏အချိန်လေးအတွက် "မျက်စိ" ။ ၎င်းကိုသူတို့၏သဘာဝဘေးများအကြောင်းကိုသာ ၄ င်းတို့ဘ ၀ ၏ရှားပါးသည့်အချိန်များ၌မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ သူတို့၏အကြံအစည်များနှင့်လုပ်ရပ်များ၏အကျိုးကျေးဇူးများအဖြစ်လည်းကောင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးသားများသည်မျက်စိမဖွင့်နိူင်ကြပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းမခံရခြင်းကြောင့်သို့မဟုတ်ရရှိမှုအတွက်လိုအပ်သောခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ခြင်း၏ရှည်လျားသောဆက်လက်သင်တန်းကိုဆက်လက်မထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ခန္ဓာ၏နိယာမများနှင့်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်သည့်ဥပဒေများနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားစင်ကြယ်စွာနေထိုင်ခြင်းအားဖြင့်နောက်ဆုံးတွင်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အသုံးမ ၀ င်သောအသုံးအနှုန်းများနှင့်စိတ်၏စွမ်းရည်များကို အသုံးပြု၍ နောက်ဆုံးတွင်သူ၏“ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည်” မိမိအလိုတော်အားဖြင့်တတိယမျက်စိ "ဟု pineal gland ။ pineal gland (သို့) တတိယမျက်လုံးကိုအသုံးပြုခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုသတ္တ ၀ ါများအကြားတည်ရှိနေရန်၊ မဟုတ်သောအရာများမှတဆင့်အမှန်တကယ်မြင်ရန်၊ အမှန်တရားကိုသိမြင်ရန်နှင့်အဆုံးမဲ့နှင့်တလုံးတ ၀ တည်းဖြစ်လာရန်ဖြစ်သည်။
ဘယ်လိုတတိယမျက်စိသို့မဟုတ် pineal ဂလင်းပွင့်လင်း, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ထိုကဲ့သို့သောဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပျက်သနည်း?
မြင့်မားသောအမိန့်ကိုမှော်အတတ်သမားတစ် ဦး သာဤမေးခွန်းကိုသေချာစွာဖြေဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောအမှန်တကယ်ဗဟုသုတကိုမျှဟန်မပြဘဲကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အကျိုးအမြတ်နှင့်အတူခန့်မှန်းနိုင်သကဲ့သို့၎င်းသည်မည်သို့ပြီးမြောက်ကြောင်းနှင့်ရလဒ်ကိုလည်းမျှော်လင့်နိုင်သည်။ သာမန်လောကဘ ၀ တွင်နေထိုင်သောသူသည်သူ၏“ တတိယမျက်လုံး” ကိုဖွင့ ်၍ မသုံးနိုင်ပါ။ ဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်တွင်းအင်္ဂါသည်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်တို့စပ်ကြားပေါင်းကူးဖြစ်သည်။ ၎င်းမှတစ်ဆင့်လုပ်ဆောင်သောစွမ်းအားနှင့်ဥာဏ်ရည်သည်အကန့်အသတ်နှင့်အဆုံးမဲ့အကြားတံတားဖြစ်သည်။ အကနျ့တှငျနထေိုငျသူသညျအကနျ့ကိုတှေးတောဆငျခွငျပွီးအကနျ့အသကျတာမှာလုပျဆောငျသူကသူအသကျရှငျနတေယျ၊ “ တတိယမျက်လုံး” ကိုဖွင့်ရန် ဦး ဆုံးပြုလုပ်ရမည့်အဆင့်မှာအတွေးများကိုထိန်းချုပ်ရန်၊ စိတ်ကိုသန့်ရှင်းစေရန်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုသန့်ရှင်းစေရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဘဝ၏အမြစ်များကိုထိခိုက်စေပြီးလူ့ဖွံ့ဖြိုးမှုတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံထားသည်။ တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုသစ္စာရှိစွာထမ်းဆောင်ရမည်၊ တာဝန်ဝတ္တရားအားလုံးကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လိုက်နာရမည်။ ထို့အပြင်ဘ ၀ သည်လူတစ် ဦး ၏တရားမျှတမှုနှင့်ညီညွတ်မှုအပေါ်တွင်မူတည်ရမည်။ အခြေခံကျသောအရာများအပေါ်အတွေးအလေ့အထများကိုဘဝ၏မြင့်မားသောအရာဝတ္ထုများနှင့်အမြင့်ဆုံးသောနေရာများသို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ပြောင်းလဲရမည်။ ခန္ဓာကိုယ်၏အားအင်များအားလုံးအတွေးတွင်အထက်သို့လှည့်ရမည်ဖြစ်သည်။ အားလုံးအိမ်ထောင်ရေးဆက်ဆံရေးရပ်စဲခဲ့ကြရပေမည်။ ဤမျှအသက်ရှင်သောလူတစ် ဦး သည်တာရှည်အသုံးမပြုသည့်မှော်အတတ်ကိုယ်အင်္ဂါများကိုတက်ကြွစေပြီးနိုးထစေလိမ့်မည်။ ခန္ဓာကိုယ်သည်ဘ ၀ သစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏အသေးစိတ်အရာအားလုံးသည်စွမ်းအားကို ဦး ခေါင်းသို့သယ်ဆောင်သွားပြီးနောက်ဆုံးတွင်၊ သူ့ဟာသူသဘာဝအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အလိုတော်၊ ထာဝရပန်းပွင့်လိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်၏မျက်လုံး၊ တတိယမျက်စိသည်ပွင့်လိမ့်မည်။ နေရောင်တစ်ထောင်၏အရောင်ကိုအလင်းဖြာနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရ။ ထို့နောက်၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြည့ ်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအားလုံးထိုးဖောက်စေသောအမှန်တရားအလင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရပါ။ အရာဝတ္ထုများအနေဖြင့်အရာဝတ္ထုများအဖြစ်ပျောက်ကွယ်သွားပြီး၎င်းတို့ကိုယ်စားပြုသည့်နိယာမသို့ပြေလည်သွားသည်။ နှင့်အစစ်အမှန်ကိုယ်စားပြုအဖြစ်အားလုံးအခြေခံမူအလှည့်အတွက်တစ်ခုလုံး၏ကြီးမားသောသို့ပြေလည်နေကြသည်။ အချိန်ပျောက်သွားသည်။ ထာဝရသည်ထာဝရကာလဖြစ်သည်။ အဆိုပါကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ချင်းစီသည်ဆုံးရှုံးခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်တိုးချဲ့။ တစ်ခုလုံးနှင့်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။